Imibono nezeluleko ezinhle kakhulu ze-Minecraft Skin (2020) - Ukudlala
IMinecraft ihlala iyizwe elenzelwe umdlali kakhulu elikulethela ukukhululeka kokwakha cishe noma yini. Unezinketho zokwenza noma yini oyifisayo, okubandakanya isikhumba somlingiswa wakho. Ziningi izindlela ongazisebenzisa ukwenza le nqubo.
Ungathola abaculi abaningana abahle online abanikela ngezikhumba zeMinecraft. Ngenye indlela, kunezinhlelo zokusebenza ezingenakubalwa nesoftware ekuvumela ukuthi udale isikhumba sangokwezifiso ongasisebenzisa eMinecraft.
Kungani Usebenzisa Izikhumba Ze-Minecraft?
Izikhumba ze-Minecraft ziyindlela yokudala yokuhlola amathuba omdlalo. Kukulethela umuzwa wokuthile 'okusha' noma 'okusha,' futhi uzuza okuhlangenwe nakho okucwiliswa kakhudlwana. Uma uthola okuthile okufana nalokho okuthandayo, kuyaphawuleka.
Abantu abaningi bathanda izikhumba zeMinecraft ngoba banenketho yokwenza umlingisi abukeke njengabo. Abantu futhi bakhetha ukubukeka njengabalingiswa babo abathandayo abavela kwimidiya ehlukile kanye ne-playplay njengalezi zinhlamvu ezinhle. Kungaba nezizathu eziningi.
I-Minecraft Imibono Yesikhumba:
Akuwona wonke umuntu ngokwemvelo ocabangelayo noma onobuciko. Ungaba ngumuntu ocabanga ukuthi kunezikhumba eziningi kakhulu ze-Minecraft ngaphandle. Kungenzeka ukuthi usebenzisa izikhala noma une-block block. Ungase ucabange ukuthi isikhumba osifunayo sesivele sikhona laphaya. Kodwa-ke, akusilo iphuzu lelo. Iphuzu ukuthi ujabulele umdlalo wakho ngokwenza ngezifiso okuhle kakhulu.
Nayi eminye imibono engavusa amajusi wakho wokudala:
1. Abezindaba Baphefumulelwe
Ingabe unayo uhlelo lwe-TV oluthandayo noma i-movie? Bese kuthiwani ngokuzama umlingiswa wakho omthandayo? Unezinketho eziningi ku-Minecraft ukuthola noma ukudala uhlamvu. Uma uneminye imidlalo yevidiyo, noma ama-Animes, abanye abaculi bahlala bekunikeza ezinye zezikhumba zezinhlamvu ezihamba phambili zeMinecraft.
Ngakho-ke, lesi ngesinye sezigaba ezilula futhi ezibanzi ezitholakalayo. Ungathola cishe noma yimuphi umlingiswa. Ngabe ufuna ama-Anime Minecraft Skins? Mhlawumbe okuthile okungokoqobo okuvela ku-Game Of Thrones? Into ukuthi, ngokuqinisekile uzothola lezi zikhumba. Izikhumba ezidumile aziphumi.
Uma kungenalutho, ungahlala njalo uzakhela eyakho.
2. Amaqhawe Nama Villains
Wonke umuntu ucabanga ngokuba yiqhawe noma umphathi omkhulu! Ungahle ungakwazi ukugqoka futhi uzulazule emhlabeni wangempela, kepha ungenza ngezifiso abalingiswa bakho eMinecraft.
Ungathola i-Dark Knight noma i-Man of Steel. Mhlawumbe ungafuna okuthile okwengeziwe kumahlaya. Into ukuthi, amaqhawe amakhulu azohlala esesitayeleni.
3. Amabhizinisi Abstract
Mhlawumbe ufuna ukugqama futhi ubukeke njengomlingiswa ohluke ngokuphelele. Izinhlangano ezingabonakali ziyingxube yemibala enesikhumba namehlo. Awunamkhawulo wokuthi umlingiswa wakho angabukeka kanjani. Ngakho-ke, ungakwenza ukuthi isimilo sakho sibe namehlo amhlophe nomzimba omnyama ngokuphelele.
Ungazama ngisho nemibala ye-neon nemithunzi ezungeze umbala wakho. Abanye abantu bakhe izinhlamvu ezibukeka njengezindawo ezinemibala, ngisho nothingo. Ungazama nale Minecraft Skin Idea, futhi.
4. Amasudi Alula
Mnyama, mhlophe, isiliva, mpunga, kubomvu. Mhlawumbe amasudi akulula kangako, kepha ungawenza abe lula kakhulu. Uma ungafuni ukuthola 'ngokujulile' kwemibala, ungafaka imibala isudi yomlingiswa wakho yonke emnyama bese uyenza ibukeke ikhanga.
Amasudi awasuki esitayeleni, noma ngabe kusempilweni yangempela noma kumdlalo. Kodwa-ke, uma ufuna ukuzama, kunamajazi amade, amajakhethi, i-fedora, nokuningi ongangeza kumlingiswa wakho. Kulungile! Thola isudi yomlingiswa wakho bese ubona ukuthi umlingiswa wakho uzobukeka emuhle kanjani!
5. Hamba Okuvamile
Le yinqubo engadinga ukuthi usebenze ngokufiphaza nemibala kakhulu. Kuya ngokuthi hlobo luni ‘lwezingubo ezingajwayelekile’ onqume ngalo kumlingiswa wakho. Ukuthola isitayela esingejwayelekile akulula, kepha uzogqama uma ungayenza isebenze. Kunikezwe ngezansi amathiphu wokukusiza ukuklama isikhumba somlingiswa wakho, ukuze lokho kungasiza.
Ungayikhiqiza Kanjani iMinecraft Skin Ideas?
Abantu abaningi bayadikibala ngokudala ama-Minecraft Skins abo. Uma ucabanga ukuthi udinga ukuba ngumculi ukwenza isikhumba sakho osithandayo, ulahlekile! Nayi inkomba esheshayo enamathiphu awusizo wokukusiza ukuthi uthole okungcono kakhulu kuzikhumba ze-Minecraft!
Qonda Imephu Yezinhlamvu:
Ngenkathi iMinecraft iyipulatifomu esebenziseka kalula, kungaba nzima ukuqonda imephu yezinhlamvu. Akuyona imilenze elula, ikhanda, amehlo, nokuthi yini. Esikhundleni salokho, uzothola okuthile okufana nomlingiswa okubekwe njengebhokisi ‘lephakeji’. Cabanga ngakho njengamabhokisi amakhadibhodi lapho uthola khona amadivayisi we-tech nokuthi yini.
Lawa maphakheji avuleka ukuze abe nama-flaps ahlukahlukene. Ngokufanayo, imephu yezinhlamvu zeMinecraft inezikwele ezihlukile nezingcweti zengxenye ngayinye yomlingiswa. Iphuzu ukuhlinzeka ngokukhululeka ekwakhiweni komlingiswa njengoba kuhlangana ndawonye. Ungahlala uhlola ukubuka kuqala, kepha akugcini nje ngokuba 'okubonwayo-okunobungane' kulabo abangabaculi.
Ezinye izinhlobo zinemephu yezinhlamvu esebenziseka kalula. Abanye bangahle babe nesitayela esiyinkimbinkimbi kakhulu ukuthi usifakele umbala. Akunandaba, uma usuthole umkhuba othile, kuzoba mnandi kakhudlwana. Zonke ziza nomaki, ngakho-ke lokho kuhlanganisa.
Ungahlala Ungenza Ngokwezifiso:
Ngeminyaka yokwenza kahle nezigidi zabadlali emhlabeni wonke, iMinecraft ineqoqo lezikhumba elibanzi kakhulu. Kodwa-ke, kusenokwenzeka ukuthi ungakutholi okudingayo. Isibonelo, ungathola isikhumba esibukeka sisihle kepha esinemibala engahambisani nalokho okuthandayo.
Ingxenye ehamba phambili ngeMinecraft ukuthi ungahlala wenza ngezifiso lezi zikhumba. Ukudlala ngokwezifiso nokusebenzisa imibala ehlukene noma imithunzi yesikhumba kuyindlela enhle yokwakha izikhumba. Ikunikeza isisekelo sokuqala, bese ungazijwayeza ukuhamba kwakho.
Uzothola ukuqonda okungcono kwengxenye ngayinye, noma ngabe kuyadida ukuthi uqonde imephu yezinhlamvu.
Amathiphu we-Shading Nemibono:
Kungcono ukuqala ngesikhumba esingenambala nhlobo. Izokuvumela ukuthi uwufake umthunzi ngokwentando yakho.
Kwezinwele, ungasebenzisi izithunzi ezi-diagonal. Kusengumlingisi we-pixel no-block, ngakho-ke kufanele uhlose ukufiphaza okuqondile. Uma ufuna ukufaka umbala nokuthungwa, ungangeza imibala ngaphakathi ngendlela othanda ngayo ngemuva kokuchaza ibhulokhi. Lokhu kuzonikeza ukuthungwa okungcono.
Okomzimba noma okokugqoka, qala ngokufiphaza izingxenye ezimnyama zomzimba. Lokho kungaphezulu, maphakathi, nangaphansi komlingiswa. Uma usukwenzile lokho, ungafaka imibala emabhuloki amile futhi ame mpo azungeze ngombala ongomunye wokhanyiso lomthunzi kunombala omnyama kakhulu. Lokhu kukulethela umuzwa ongcono wokubala imibala.
Emilenzeni noma ebhulukweni, ingxenye ephezulu ephezulu kufanele ukuthi ibe mnyama kakhulu bese inwebela ngaphandle ukuze ibe lula. Le yindlela engcono kakhulu yokuthi ufake umbala futhi ufihle iMinecraft yakho ngokukhululeka okukhulu. Ungazama izicathulo ngokuya ngobuhlakani bakho.
Manje unemibono emihle kakhulu futhi enobuhlakani obuningi ongazama ngayo. Ngokwengeziwe, unamathiphu wokusebenza nokwenza i-Minecraft Skin yakho. Uma ungaqiniseki, ungahlala useshela izikhumba ezinhle kakhulu ze-Minecraft nemibono ongayilanda ku-inthanethi!
Lungisa iphutha le-Minecraft Remoteconnect
ungawathola kanjani amakhadi ezipho mahhala
ungaqhubeka ku-kik kukhompyutha
amasayithi wokubuka ama-movie wamahhala online ngaphandle kokubhaliswa
bukela amawebhusayithi wamahhala akwi-inthanethi
Isaphulelo sabafundi basekolishi i-apula
izinhlolovo ezikhokha amakhadi wesipho we-amazon